echoshare iOS System Recovery - idozi iOS Error & Get iPhone / iPad Laghachi na Nkịtị
iOS Iweghachite ntanetị
A pụrụ ịdabere na iPhone na iPad System Error idozi ngwá ọrụ
Idozi iPhone na iPad Stuck na ọnọdụ DFU, ọnọdụ mgbake, akara Apple, ọnọdụ ekweisi & ihe ndị ọzọ.
Kwado iOS ngwaọrụ niile na ụdị iOS ọ bụla (iPhone na iPad).
Nzube nchekwa nke 100% Enweghị data ọnwụ.
Nịm gị iPhone, iPad laghachi nkịtị ugbu a!
Imeri Download Mac Download Imeri Download Mac Download
Ndozi All Isi iOS usoro njehie
Zọpụta ngwaọrụ iOS site na ọnọdụ DFU, ọnọdụ mgbake, akara Apple, ọnọdụ ekweisi, wdg.
nkwado All Ngwaọrụ iOS
Kwado iPhone 12 Pro Max / 12 Pro / 12/12 mini, iPhone 11 Pro Max / 11 Pro / 11, iPhone XS / XS Max / XR / X / 8/8 Plus, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPod. ..
Nchekwa 100% iji
Enweghị nje, dị mfe ịwụnye na iwepụ, Enweghị ozi nzuzo ga-anakọtara.
Naghachi iOS sistemụ njehie Na Mfe
O doro anya na ị nwere ike idozi iPhone / iPad gị na usoro gọọmentị ga-ewe gị oge buru ibu ma eleghị anya ị ga-atụfu data gị. echoshare iOS Sistem Iweghachite dị mfe iji maka aka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Naanị tinye iPhone / iPad gị na Windows ma ọ bụ Mac ọ ga - achọpụta na ngwaọrụ gị na akpaghị aka. Naanị họrọ ọnọdụ ahụ ma soro ntuziaka ahụ, ị ​​ga-enwe njehie iPhone / iPad gị niile wee mezie sistemụ iOS ka ọ dịghachi.
Downgrade na upgrade iOS na-akwado Version
Akụrụngwa a na-enye gị nhọrọ iji wedata ma ọ bụ melite nsụgharị iOS gị nke na-agba na ngwaọrụ gị n'oge usoro idozi. Ma downgrade iOS si 14 na 11/10, ma ọ bụ nweta nkwalite iOS si 11 na 14, ọ pụrụ inyere gị aka rụchaa ọrụ na clicks, ihe ị chọrọ ime bụ họrọ iOS version na ndọpụta ndepụta ka ngwá ọrụ a na-eme ezumike ahụ. Ga-enwe gị iOS ngwaọrụ azụ na-adị ndụ.
Idozi njehie iPhone na iPad ọnọdụ dị iche iche
iPhone araparawo na mgbake mode? iPhone anaghị aza? ma ọ bụ na ọ dị nnọọ rapaara na-enweghị ihe kpatara ya? iOS Sistem Iweghachite ga - edozi ya maka gị, lee ihe eserese ahụ dị ka n'okpuru iji chọta ọnọdụ ị nọ ma budata iOS Sistemu Iweghachite iji dozie ihe ndị a niile ka ọ dị mma. Ọ dị ike na ịkwado ụdị iPhone na iPad gụnyere iPhone 12, iPhone 11 na iPhone X, wdg.
iPhone araparawo na mgbake mode
iPhone na-enweta nsogbu na ọnọdụ DFU
iPhone dị na ihu ojii / acha anụnụ anụnụ / ọbara ọbara / acha ọcha
iPhone na-egosi akara Apple
iPhone rapaara na isi ekwe ntị na ọnọdụ
iPhone akpọnwụwo n'ihi ụfọdụ ihe
iPhone nwere nkwarụ
iPhone nwere nkwarụ mgbe emeghere ọdịda
Loop Malitegharịa ekwentị
iPhone nọ n'ọnụ nke ịmalitegharị
iTunes Njehie mmekọrịta iOS ngwaọrụ, kwado ngwaọrụ iOS, melite ngwaọrụ iOS, weghachite ngwaọrụ iOS, jikọọ ụlọ ahịa iTunes, ijikọ ngwaọrụ, enweghị ike iweghachite njehie.
Ngwaọrụ Njehie: iPhone nwere nkwarụ, iPhone gbanye, Okwu ebubo, Mmegharị, Loop Malitegharịa ekwentị, Nyochaa Mmelite, Igbapu batrị.
Okwu ihuenyo: Apple Logo, Ihuenyo anaghị azaghachi.
iOS Mode Okwu: Ogbi ogwe, Ọnọdụ Nchekwa, Weghachi Ọnọdụ, Ọnọdụ Shuffle, Ọnọdụ mbugharị.
Lelee Ngwọta Iweghachite iOS anyị ngwugwu
Site na ngwugwu ngwugwu iOS Iweghachite, ị nwere ike weghachite data furu efu na ngwaọrụ iOS, kwado data iOS, dozie nsogbu iOS, ma mepee iPhone ma ọ bụ iPad.
iOS Data ndabere na weghachite
Bilie gị iOS ngwaọrụ Laghachi na Nkịtị Ugbu a!
Download ya na kọmputa gị, mee ole na ole clicks, edozi nsogbu.
Kedu Ndi mmadu kwuru
M na-agba ọsọ a ekwentị idozi ụlọ ahịa na m obodo na echoshare iOS System Recovery bụ otu n'ime ndị kasị mma m ngwá ọrụ mgbe gwara iPhone Njehie dị ka rapaara ma ọ bụ mba aza ọnọdụ.
Nwa m nwanyi jiri iPad Covid-16 gwuo egwu kwa ubochi ma wepu ya. Enwere m obi uto na achọtara m ngwa ọrụ a iji nyere m aka weghachite iPad m.
M kwalitere usoro iOS na iPhone 12 m na iOS 14 dị ka Ihe m mere na mbụ. Ọ Nọgidere na Black Screen. Iweghachite sistemụ iOS weghaara iwe m.
iOS Sistem Iweghachite (Mmeri)
$44.95/ ndụ niile
Maka ndụ niile;
$96.00/ ndụ niile
X PCX PC
iOS Sistem Iweghachite (Mac)
Ghọta na Would Ga-achọ Fọdụ Nduzi Ebe a
Idozi iPhone White Screen nke Ọnwụ
Idozi iPhone na-amalitegharị
Otu esi eweghachi iPhone nwere nkwarụ
Etu ị ga-esi pụọ na Ọnọdụ Iweghachite iPhone
Olee otú Tinye na Wepụ iPhone DFU na ọnọdụ
Ihe niile gbasara ọnọdụ iPad DFU
Otu esi emeghe iPhone